Linux Mint 12 တွင်အမှားပြင်ဆင်မှုများ Linux မှ
Linux Mint 12 တွင်အမှားပြင်ဆင်မှုများ
ယောက်ျားလေးများ Linux Mint ၎င်းတို့သည်သုံးစွဲသူများအားတည်ငြိမ်။ အသုံး ၀ င်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဒီဟာကိုနောက်မှစစ်ဆေးလို့ရပါတယ် ပြင်ဆင်ချက်၏ပမာဏကြည့်ဖို့ ကြောင်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်လတံ့သောအရာကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည် Linux Mint 12.
PPA repositories ကိုထည့်သွင်းဖို့ option ကို fixed ။
Mate သည် mate-session-manager အတွက်အရေးကြီးသော update ကိုရရှိခဲ့သည် (ဒီအမှားက M386 iXNUMX အသုံးပြုသူများအတွက် login မျက်နှာပြင်မှစတင်ခြင်းကိုတားဆီးပါသည်။ )
mintMenu မှပေါ်ပေါက်ခဲ့သည် အိမ်ထောင်ဖက်.
Packages GD နှင့်အတူဖွင့်လှစ်ကြသည်အီဘီ.
MGSE M က enu ကီးဘုတ် shortcut များကိုလက်ခံပြီး bug fixes အမျိုးမျိုးကိုလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်သည်
MGSE-WindowList ပုံအသစ်တစ်ခုကိုပေးခဲ့ပြီးယခုပြတင်းပေါက်စာရင်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် GNOME 2.
MGSE-Bottompanelယခုအခါကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများ အသုံးပြု၍ Workspace များအကြားပြောင်းလဲနိုင်ပြီဖြစ်သည် Ctrl + Alt + Arrow ခလုတ်များ.
Mint-Z ၏အင်္ဂါရပ်များသည်ယခုအခါပန်းကန်များ၊ မီနူးနှင့် ၀ င်းဒိုးစာရင်းတို့၏နောက်ခံပေါ်တွင်ငွေရောင်ရှိသည် Linux Mint 11 ။ ယခုအသစ်တစ်ခုကိုခေါ်ခေါင်းစဉ်ရှိပါတယ် Mint-Z-Dark, အနက်ရောင်အစိတ်အပိုင်းများရှိပြီးငါ၌တွေ့မြင်သောအရာတခုတခုအပေါ်မှာတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်သော RC de MGSE.
root အဖြစ် directory များဖွင့်လှစ်နိုင်စွမ်း Gnome3ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Clem ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည်:
RC မှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောတုန့်ပြန်မှုများသည်များသောအားဖြင့်မရိုးရှင်းပါ။ အံ့သြစရာတော့ Gnome3မွာ Linux Mint အသိုင်းအဝိုင်းကိုခွဲဝေနေသည်။ MGSE သည်ကောင်းစွာလက်ခံပြီး Gnome3သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများကိုကူညီပေးခဲ့သည်ကိုတွေ့ရ။ ကျွန်ုပ်တို့အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ MGSE သည်ထင်ရှားသည့်တိုးတက်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ Linux Mint 12 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသည်အတွေ့အကြုံများစွာပေးမည့် Gnome3နှင့်အတူလာလိမ့်မည်။ RC ဗားရှင်းထက်ပိုကောင်းတယ်။
ငါ Gnome2အသုံးပြုသူများသည်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်ကိုငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနားလည်ပါတယ် ၎င်းသည် Gnome3သို့မဟုတ် MATE ဖြစ်လျှင်၎င်းနည်းပညာများသည်မကြာသေးမီကဖြစ်ပြီး Gnome2ကဲ့သို့ရင့်ကျက်မှုမရှိပါ။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ Gnome2နှင့်ပူးပေါင်းခြင်းသည် packets များနှင့်ပconflictsိပက္ခများအားအခြေအနေနှစ်ခုလုံးနှင့်အတူ runtime နှစ်ခုလုံးအတွက်အခြေအနေဖြစ်စေလိမ့်မည် Gnome3နှင့် Ubuntu သည်လုံးဝမအောင်မြင်နိုင်ပါ။ တစ်နည်းပြောရလျှင် အကယ်၍ Gnome 2.32 ကိုသိမ်းဆည်းထားပါက Linux Mint သည် Ubuntu နှင့်မသင့်တော်တော့ဘဲ Gnome3ကို Linux Mint တွင် အသုံးပြု၍ မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Gnome2ကိုအထောက်အကူပြုသောဖြန့်ဝေမှုများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် MATE ကိုအနည်းငယ်ထောက်ခံသူများထဲတွင်ပါဝင်ပြီးဤပြောင်းလဲမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်ဒီ desktop အသစ်တွင်လူတို့၏ခံစားချက်ကိုခံစားရစေရန် Gnome3တွင်တီထွင်နေကြသည်။
Gnome2ကိုပိုမိုနှစ်သက်သောအသုံးပြုသူများအတွက် Linux Mint ဗားရှင်းဟောင်းများကိုယခုအချိန်အထိရရှိနိုင်ပါသည်။
… Gnome3 MGSE သည် Linux Mint desktop အတွက်ရူပါရုံအသစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Linux Mint 12 တွင်အမှားပြင်ဆင်မှုများ
အချိုးအစားမညီမျှမှုရှိတဲ့ Ram အရင်းအမြစ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘာမှမပြောခဲ့ကြဘူးလား။ CPU ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုလား?
Ubuntu ကိုအခြေခံသည်ဟူသောအတွေးသည်အလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းပြီးကျွန်ုပ်သည် gnome ကိုချစ်မြတ်နိုးသူလည်းမဟုတ်ပေ။ သို့သော်တစ်နေ့တွင်၎င်းကိုအခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။
ယခုငါ Arch ကိုနေ့တိုင်းငါ့ကိုပိုပြီးစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်။
ငါစိတ်ကူးကိုမကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ သုံးစွဲသူများသည် LMDE သို့အဓိကဖြန့်ဖြူးရန် LMDE သို့ပြောင်းရန် Linux Mint ကိုပိုမိုတောင်းဆိုနေကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကတကယ့်ကိုလှိမ့်တဲ့စက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးမယ့်အစား Debian CUT ကိုအားမကိုးကြဘူး။
တကယ်တော့ Debian CUT ဟာစမ်းသပ်ခြင်းထက် Rolling ပိုမပေးပါဘူး။
၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောပူစီနံ၊ Ubuntu ထက်ရိုးရှင်း၊ လှပပြီးယခုအချိန်တွင် ပို၍ တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး၊ mint 12 rc သည်အမှားအယွင်းများစွာဖြစ်ပွားပြီး shell ကိုကြိမ်ဖန်များစွာပျက်ပြားစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားဖြစ်ဗီဒီယိုကိုတင်လိုက်လျှင်အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။ သူတို့ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူသွားပါ။
ငါ RC ကိုသုံးတယ်။ Gnome3ရဲ့အတွေ့အကြုံကဘယ်လိုပိုကောင်းမလဲဆိုတာကိုငါတကယ်မစဉ်းစားနိုင်ဘူး။
Desdelinux-Manx အဘိဓါန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။
ကောင်းကောင်းငါ mac world ကလာပြီး mint12 ကို install လုပ်ထားတယ်။ arch and bsd က install လုပ်ဖို့ပိုစျေးကြီးတဲ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတယ်။ ၈ gb နဲ့အတူ i5 2500k pc ရှိစွမ်းဆောင်ရည်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အရင်းအမြစ်များကိုစားသည်။ Snow Leopard (သို့) win 8 ထက်, အားနည်းချက်ကတော့ nvidia driver ဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံမှာငါလုံးဝအနားယူပြီးပုံကိုအေးခဲအောင်လုပ်တဲ့အခါငါက gimp ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာရှုံးနိမ့်တတ်တယ်။ ငါသူနှင့်အတူ7ရက်ရှိခဲ့သည်နှင့်ယခုအချိန်တွင်ကောင်းသောလေးစားမှု။
Great Jose, i5 နဲ့ 8Gb RAM တွေသုံးထားတယ်။ ဘာမှားလဲ။ ဟားဟား..
မင်္ဂလာပါဟိုဆေး, ငါတို့ site ကိုမှ welcome ကြိုဆိုပါသည်
Mint သည် Ubuntu ကိုအခြေခံသည်။ ၎င်းသည်အတည်ငြိမ်ဆုံးမဟုတ်သောအရာများမဟုတ်သောကြောင့် driver ပြproblemနာသည်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
LMDE (Linux Mint Debian Edition) ဖြင့်စမ်းကြည့်ပါ၊ အကယ်၍ သင်သံသယရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် LMDE တပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာများကိုဤနေရာတွင်ထည့်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်ကြည့်လိုလျှင်ကြည့်ပါ။
မင်္ဂလာပါ <° Linux:
ငါ WinVista ကနေ Linux ကိုလာတာကံကောင်းတာကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က LM9 (Linux Mint9"Isadora") ကြိုးစားရန်ကြိုးစားသည်။ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့အတွက်အင်စတောလုပ်ရန်မလွယ်ကူကြောင်းဝန်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘဝသည်စာဖတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်မှာကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများနှင့်အခြားသူများကိုအချိန်များစွာကုန်လွန်ခဲ့ခြင်း၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကျွန်တော် install လုပ်တော့အံ့သြသွားတယ်။ LM9 အစိမ်းရောင်ကကျွန်တော့်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မရဲ့လက်တော့ပ်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ် (သြဂုတ်လအလယ်ပိုင်း) မှာ 15GB Ram, 5110 DD, i6 ပရိုဆက်ဆာနှင့် Nvidia GeoForce GT 640M 7G ကတ်ပြားတစ်လုံး [Dell Inspiron 525R (N1) နဲ့အခြား laptop တစ်လုံးဝယ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ ငါရောက်လာပြီငါလှပတဲ့ LM9 ကိုတပ်ဆင်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါတော်တော်များများကမသိခဲ့ဘူး၊ ဒါကယာဉ်မောင်းတွေနဲ့တခြားသူတွေနဲ့ပြaနာတစ်ခုလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ LM11 ကို kernel အသစ်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘက်ထရီပြproblemနာကြောင့်ငါကြောက်တယ်။ ထို့အပြင် Compiz သည် LM11 နှင့်မကိုက်ညီပါ - ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကြောင့်သာဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ငါ LIVECD mode မှာ Fedora 15, OpenSuse (Gnome3 ဖြင့် version), LMDE 201109 ကိုကြိုးစားခဲ့ပြီးသူတို့အားလုံးတွင်တူညီသော kernel ပြproblemနာရှိခဲ့သည်။ Win7 မှာမရှိတဲ့ Lap အပူလွန်ကဲမှုကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။
Win7 မှာကျွန်တော်ရဲ့ပရိုဆက်ဆာ ၈ လုံးရဲ့ Core ၄ ခုကရပ်သွားပြီး LMDE4 ကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာအပိုင်း ၈ လုံးဟာအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတုန်းပါပဲ။ အကယ်၍ သူတို့ကို Ondemand mode တွင်တစ်ခါတစ်ရံထည့်ပါကသူတို့သည်ထိပ်သို့မီးတက်လိမ့်မည်။ Processor တစ်ခုလုံးနိမ့်ကျနေသော်လည်းမည်သည့် core မျှရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်သူတို့ကို Reserve mode တွင်ထားပါကအရေးမကြီးပါ။
Grub ထဲမှာ "pcie_aspm = force" ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါအဆင်ပြေမပြေလားမသိဘူး။ ငါ LMDE201109 ကိုတပ်ဆင်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီဖြေရှင်းချက်ကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာမသိဘူး၊ ငါ့စက်ကိုငါမစွန့်စားဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီမေးခွန်းသုံးခုကိုမေးချင်ပါတယ်။
၁။ ဤပြproblemsနာများ (ဘက်ထရီနှင့်အပူလွန်ကဲမှု) ကို LM1 ဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
၂။ LMDE2 နှင့်ပြtheနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။
၃။ ဤအမှားများမရှိတော့ဟူသောယူဆချက်အောက်တွင် LM3 စတင်ပြီးနောက် LMDE ထွက်လာရန်ကျွန်ုပ်ပိုကောင်းပါမည်လော။
ငါ၌ linux mint 12 ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သော်လည်းအမှားမရှိဘဲနောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုလိုချင်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နေသည်ဆိုလျှင် terminal ကိုငါဘယ်လိုပြောမလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ link တွေရှာပြီးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ terminal ကိုငါဘယ်လိုပြောမလဲ။ ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားကလာတဲ့ link ကိုပေးရင်ကျေးဇူးတင်ပါ။
Linux သည်သင်အသုံးပြုသော distro ကိုပြသပြီးဖြစ်သည်